Miaraha amin'ny Reef Resilience Network | Reef Resilience
Mizaha ny tambajotran'ny Reef Resilience
Ny Reef Resilience Network dia manome ny siansa farany, ny fitarihana ary ny loharanon-karena, ary koa ny fidirana mivantana amin'ny manam-pahaizana sy ny mpiara-miasa, mba hanampiana ireo mpitantana hamaha ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fandrahonana eo an-toerana amin'ny haran-dranomasina sy ny rafitra mifandraika amin'izany.
Midira ao amin'ny Reef Resilience Network amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana amin'ny e-newsletter. Hahazo fampahalalana momba ny siansa sy ny paikady fitantanana ny haran-dranomasina farany ianao, ny fahafahana manofana, ny fanambarana amin'ny webinar, ary ny maro hafa.
Mpitantana an-dranomasina ve ianao na mpitsabo? *
The Network Forum dia sehatra fifanakalozan-dresaka an-tserasera ho an'ny mpitantana an-dranomasina, ny mpitsabo ary ny manam-pahaizana ihany. Raha liana amin'ny fidirana amin'ny Forum Network ianao dia fenoy azafady ny fangatahana fohy misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEto.